Xaaladda caafimaadka, sharci dejinta, Hirak ... wixii Tebboune u sheegay martidiisa - Jeune Afrique - TELES RELAY
xaaladda caafimaadka, sharci dejinta, Hirak ... wixii Tebboune u sheegay martidiisa - Jeune Afrique
By TELES RELAY On Feb 18, 2021
Jeune Afrique waxaa lagu qabtay isweydaarsiga (4/4) - Jeune Afrique
Messanga Nyamding: “Arinta Isboortiga ee Olembe waxaa laga yaabaa…
Mahamane Ousmane wuxuu dalbanayaa "siideynta dhamaan maxaabiista" -…
Markii uu kasoo laabtay Jarmalka kadib qalliin cagta ah, madaxweynaha Algeria wuxuu qaabilay xubno ka tirsan mucaaradka si uu ugu sharraxo muhiimadiisa iyo qorshihiisa siyaasadeed. JA wuxuu bixiyaa faahfaahinta wada hadalka.
La soo celiyey Febraayo 12 ka dib muddo bil ah oo isbitaal la dhigey Jarmalka, Abdelmadjid Tebboune isla markiiba wuxuu ku noqday shaqadiisii. Markaad hesho laba maalmood oo isku xigta - Febraayo 13 iyo 14 - oo ah lix hoggaamiyeyaal xisbiyo mucaarad ah oo fadhiya kursiga madaxweynaha, Madaxa Gobolka wuxuu muujinayaa inuu diyaar u yahay inuu arrimaha dib ula soo noqdo oo uu dejiyo ajandaha siyaasadeed ee sannadka labaad ee waajibaadka, marka ay Aljeeriya xusayaan sanad-guuradii labaad ee Hirak, oo soo afjartay labaatan sano oo xukunkii isaga ka horreeyay.
Xanuunkiisa, jahwareerkiisa dheer, xaaladdiisa caafimaad, mudnaanta uu siinayo tobanka bilood ee soo socda, shirarka doorashada ee xigta, qadarinta uu u hayo waxqabadka dowladiisa, Hirak, maaraynta cudurka faafa ee Covid-19 ... aad u tiro badan mawduucyada ay ku xallisay Tebboune hortooda booqdayaasheeda.
Tebboune waddo dheer ayuu soo maray
Waxaa saameeyay Covid-19 bishii Oktoobar 2019, madaxweynaha Aljeeriya waxaa markii ugu horreysay la dhigay isbitaalka militariga ee Ain Naâdja ee ku yaal magaalada Algiers muddo toddobaad ah, ka hor inta aan si deg deg ah loogu daadgureynin 28-ka Oktoobar xarun caafimaad oo caan ah oo ku taal Cologne, xaalad aad u welwel badan "Runtii wuxuu ku jiray qatar kahor intii aan loo daad gureyn Jarmalka", xukuma mid ka mid ah booqdayaasha madaxweynaha. 75 jir, sigaar cabaya badan, madaxweynaha wuxuu soo bandhigayaa dhibaatooyin u baahan daryeel culus waqtiga wareejintiisa. Xaaladiisa caafimaad ayaa markaa kor u kacaysa kun iyo hal xanta.
Isbitaal dhigistiisa iyo sidoo kale murugadiisa, oo qaadatay dhowr toddobaad, waxay gacan ka geysaneysaa mala-awaalka shidaalka kartidiisa gudashada waajibaadkiisa. Ku soo laabashadiisii ​​dalka bishii Diseembar 28 si kastaba ha noqotee ma caawinayso in la qanciyo Aljeeriya iyo in la aamusiyo wararka xanta ah, laga soo bilaabo 10-kii Janaayo, Tebboune wuxuu ku laabtay Jarmalka si qalliin loogu sameeyo cagtiisa midig, oo ay saameysay dhiig-baxa. Dhakhaatiirta Jarmalka ayaa sameeyay waxqabadyo, madaxweynaha ayaa ku qirtay hortooda martidiisa.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.jeuneafrique.com/1123719/politique/algerie-etat-de-sante-legislatives-hirak-ce-que-tebboune-a-confie-a-ses-visitors/? Utm_source = dhalinyarada Afrika & utm_medium = flux-rss & utm_campaign = flux-rss-young-africa-15-05-2018
TELES RELAY 40666 posts 1 comments
Kuwani Jabbaan ah oo maalgashi ku sameeya Afrika - Jeune Afrique
PROS y CONTRAS by LAUTARO MARTÍNEZ al REAL MADRID - Video
Messanga Nyamding: "qilaafka isboortiga Olembe wuxuu sababi karaa ...
Mahamane Ousmane wuxuu dalbanayaa "siideynta dhamaan maxaabiista" - Jeune Afrique
59 maxaabiis damiir leh ayaa lasiidaayay - Jeune Afrique